Yakanakisa SEM zano reecommerce | ECommerce nhau
Tevere isu tichataura zvishoma nezve izvo a SEM zano reEcommerce nenzira yekuti mhedzisiro yakanaka inogona kuwanikwa. Tinoziva kuti iyo SEM chero chiitiko chekushambadzira chinoitwa mukati mekutsvaga injinizvisinei kuti chiito chekubhadhara here kana kuti kwete.
Saka iyeye Ecommerce SEM zano rinoshandaIwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti mapeji ese ewebhusaiti akanyatso nyorwa neinjini huru dzekutsvaga dzakadai seGoogle, Yahoo uye MSN. Panguva ino zvakakosha kufunga kuti marobhoti ekutsvaga akaomerwa nekurongedza mapeji akagadzirwa zvine simba.
Pamwe chete neizvi, iyo SEM zano reEcommerce iyo inodawo kuvandudza yakasimba keyword runyorwa. Ndosaka iri zano rakanaka kuti uongorore zvekare runyorwa urwu kanokwana kwemwedzi mitatu kuti uve nechokwadi chekuti urikugadzirira mazwi akakurumbira anoshandiswa nevatengi kuti vawane zvavari kutsvaga.
Izvo zvinokurudzirwa zvakare kugadzirisa mamiriro eiyo kutsvaga kwepanyama nekutora zvirimo zvekuita zvirinani. Zvemukati zvinogona kukwidziridzwa kutenderedza akakosha misiyano senge peji rezita, chigadzirwa zita, metadata, tsananguro, alt tag mumifananidzo, nezvimwe.
Zvino, zvakakosha mu SEM zano reEcommerce, Vangangove vatengi vanotumirwa kune yakaratidzwa kumhara peji. Rangarira kuti kana mutengi angangodzvanya pamhedzisiro mumajini ekutsvaga, anofanirwa kuendeswa kune inoenderana peji resaiti uye padhuze nepotenga chaipo sezvinobvira.
Chekupedzisira hatifanirwe kurasikirwa nekuona izvo zvese SEM zano reEcommerce, Inofanira kusanganisira kudzidza kwakadzama kwevatengi uye nemabatiro avanotsvaga zvigadzirwa. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti uongorore kutsvaga kwemukati kuti uzive mazwi akakosha nemitsara iri kushandiswa nevatengi. Aya mazwi anofanirwa kubva awedzerwa kune runyorwa rwemazwi akakosha, pamwe nezviri mukati zvakanyorwa pane saiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEM » Yakanakisa SEM zano reecommerce
Software ye manejimendi eCommerce